ရဲ ဝန်ထမ်းများ ပြောပြ သော ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ မြို့နယ် က ခိုးဆိုး လုနှိုက် အမှုများ နောက် ကွယ် – Cele Posts
ရဲ ဝန်ထမ်းများ ပြောပြ သော ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ မြို့နယ် က ခိုးဆိုး လုနှိုက် အမှုများ နောက် ကွယ်
ရဲဝန်ထမ်းများပြောပြသော ခိုးဆိုး လုနှိုက် ပြဿနာ” လှိုင်သာယာမြို့နယ် ထဲမှာ ခိုးဆိုးလုနှိုက် တွေ များပြားနေတာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့ စကားပြောကြည့်မိတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ရင်ဖွင့်ချက် aလးတွေကို အများသိရှိပြီး ဝေဖန်အကြံပြု နိုင်အောင် တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ခိုးဆိုးလုနှိုက်တွေ ဘာ့ကြောင့်များ နေရတာလဲ?
လှိုင်သာယာမှာ လူဦးရေ အရမ်း ထူထပ်များပြားလာကြောင်း။ ယခင်က ရပ်ကွက် အလိုက် ကောက်တိုတွေ ရဲ့စာရင်းကို ပြုစုရကြောင်း၊ ခိုးဆိုးလုနှိုက် ကျူးလွန်ဖူးသူတွေရဲ့ စာရင်းတွေပါ သူတို့စီမှာရှိကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိ ကျူးလွန်နေသူတွေဟာ ကျော်ကြားစာရင်းဝင် သူတွေမဟုတ်ဘဲ လူငယ်၊လူသစ် တွေဖြစ်နေကြောင်း၊ ယခင်လို ပုံစံကျူးလွန် တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကြုံရင်ကြုံသလို နယ်မရှောင် နေရာမရှောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကျူးလွန်နေခြင်းကြောင့် အမှုတွေများ လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လုယက်သူ တစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိရင် အမှုက ၄မှုမှ ၁၀မှုထိ ပေါ်ပေါက်ကြောင်း၊ ထိုလူမျိုး ၁၀ယောက်ဆိုရင်ပင် အမှု ရာကျော်သွားနိုင်ကြောင်း၊ ဧည့်စာရင်းဥပဒေမရှိတော့တဲ့အတွက် ဧည့်စာရင်းစစ်လို့မရတော့ကြောင်း ပြောင်းရွှေလုပ်သားတွေနှင့်အတူ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေပါ ပါလာတတ်ကြောင်း၊ မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားရန်ခက်လာကြောင်း၊ တချို့ဆိုရင် မထင်ရလောက်အောင်ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်တတ်ကြောင်း၊ ရဲဝန်ထမ်းအင်အားမှာလည်းမလုံလောက်ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သူအများစု ဟာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ထက် အလုပ်လက်မဲ့ လွယ်လွယ်ရ၊ လွယ်လွယ်သုံးဖြုံးချင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း
ဆိုးသွမ်းရမ်းကားသူများကို ဖမ်းဆီးရာမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အတွက် အန္တရာယ်များပါကြောင်း၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားသည့်တိုင် ဓားနဲ့အထိုးခံရတာလည်း ရှိတတ်ကြောင်း ခုနောက်ပိုင်း ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာ မျိုးတွေရှိလာတဲ့အတွက် လူဆိုးလူမိုက်များကို ဖမ်းဆီးလို့ရပေမယ့် အပြစ်ပေးတဲ့ အလုပ်ဟာ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ကြောင်း၊ မကြာသေးခင် က အောင်မင်္ဂလာဈေးရှေ့မှာ သိမ်သမုတ်ပွဲစောင့်ရှောက်နေတဲ့ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ မူးယစ်ရမ်းကားသူများအားတားဆီးရာတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဓားထိုးခံရကြောင်း၊ ထိုအမှုကို တရားခံဘက်မှ နာမည်ကျော်ရှေ့နေများငှါးရမ်းပြီး လိုက်နေတဲ့အတွက် ထိုရှေ့နေမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပင် တရားစွဲမည့်သဘောမျိုးတရားခွင်မှာပြောဆိုခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း၊ တချို့သောတရားစီရင်ရေးမှာ အံ့သြစရာကောင်းကြောင်း၊ ရဲတွေက လုံးထွေးဖမ်းဆီးပြီးမှ မိတဲ့တရားခံတွေဟာ တရားခွင်ကနေ ပြန်လွတ်လာကြကြောင်း၊ ပြန်လွတ်လာတာနဲ့ဖမ်းတဲ့ရဲကို အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်ရန်ပြုတတ်ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာလည်း လူသားများဖြစ်၍ သေမည်ကိုတော့စိုးရိမ်ကြကြောင်း၊
သေမှမကြောက် ခပ်မိုက်မိုက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတော့ အဝေးကိုရောက်အောင်နည်း အမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ဆောင် တတ်ကြောင်း၊ တချို့ဆိုရင် ကုံးသီးတွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတတ်ကြောင်း၊ ကြာလာတော့ လည်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မသိသလိုဆောင်လာ ရတော့ကြောင်း၊ ဖြစ်မှ ထပြီးအရေးယူရတာတွေ လုပ်ရတော့ကြောင်း၊ မှုခင်းတွေများရင်သာ ရဲတွေကို အပြစ်တင်ကြပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီး မှုခင်းနှိမ်နင်းဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့သူ ရှားပါးကြောင်း၊ ကောက်တိုတွေကို တွေ့တာနဲ့ ပထမအကြိမ် သတိပေးပြီး ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဖမ်းဆီးအရေးယူကြောင်း၊ သို့သော် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှား သူများရဲ့ရန်ကိုလည်းရှောင်ရှား ရသဖြင့် ထင်သလောက် မလွယ်ကူ ပါကြောင်း၊ နဝလီရွှေဝယ်သူ များကို ချိတ်ဆက်အကူအညီတောင်းပြီး မှုခင်းကျဆင်းရေးအတွက် ရွှေတိုရွှေစ လာရောင်းရင်သတင်းပေးဖို့ စည်းရုံးပေမယ့် မိမိအကျိုးကို လက်လွှတ်ခံပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဦးစားပေးကာ သတင်းပေးတဲ့သူမှာ အင်မတန်ရှားပါးကြောင်း၊
တချို့ရွှေဆိုင်ကြီးများမှာ ပြင်ပရွှေမဝယ်ပါဟု ဆိုင်းဘုတ် တပ်ထားသော်လည်း နောက်ကွယ်တွေ ပြင်ပရွှေဝယ် သူများကို ငွေထုတ်ပေးနေသူများလည်း ရှိတတ်ကြောင်း၊ ထိုသူများမှာ ပါတီတစ်ခုခုရဲ့ အရှိအဝါကို အမိအရဆုတ်ကိုင် ထားတတ်ကြောင်း၊ မိမိတို့မှာ သူခိုးလက်ခံမှန်း သိသိကြီးနဲ့ ဖော်ထုတ်မရတာမျိုး တွေလည်းရှိတတ်ကြောင်း၊ သိန်းရာကျော်တန်ပစ္စည်းကို ၅သိန်းလောက်နဲ့ ရောင်းသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်က တရားခံများ မိလို့ သူရောင်းတဲ့နေရာလိုက်ပြတဲ့အခါ ရွှေဝယ်တဲ့ နဝလီရွှေဝင်ဆိုင်တွေဟာ မရှိတော့ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြို့နယ်ထဲမှာ CCTV အကူအညီ ယူရာမှာလည်း ထိုCCTVများ ဖျက်ဆီး၊ပျောက်ရှမှု မဖြစ်စေရေး ပြည်သူတွေကိုပဲအကူအညီတောင်းခံရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ၂၄နာရီတာဝန်ထမ်းနေရတဲ့အပြင် နေ့စဉ် ပြဿ နာ ပေါင်းများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများကာ ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာ၌ နားဝင်ချိုအောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြဖို့ အတော်အားနည်းသည်ကိုလည်း ဝန်ခံပါကြောင်း၊ ထို့အတွက်နားလည်ပေးစေလိုကြောင်း၊
အိပ်ရေးမဝတဲ့သူများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး စိတ်မရှည်တတ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်တတ်ပါကြောင်း ပြည်သူထဲက ပေါက်ဖွားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဟာလည်း လူသားတွေပင် ဖြစ်လို့ မှားတဲ့အခါမျိုး တွေမှာ ဝိုင်းဝန်းဆဲဆိုကြသလို မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ အတွက်လည်း အားပေးကြစေလိုကြောင်း။ မိမိပယောဂကြောင့် မှန်ကန်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မိမိမြို့နယ်အတွက် မဆုံးရှုံးစေ လိုကြောင်း။ ပြောပြ သိရှိရပါသည်။ ပြည်သူအနေနဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို မှားရင်လည်းထောက်ပြ ဝေဖန်ပြီး တည့်မတ် ပေးကြဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာကြဖို့၊ မှန်ကန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုလည်း အားပေးကူညီကြဖို့ ဒါမှသာ မိမိမြို့နယ် အတွက် မှုခင်းကျဆင်းရေးတွင် ကူညီရာအမှန် ရောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ရဲ ဝနျထမျးမြား ပွောပွ သော ရနျကုနျ လှိုငျသာယာ မွို့နယျ က ခိုးဆိုး လုနှိုကျ အမှုမြား နောကျ ကှယျ
ရဲဝနျထမျးမြားပွောပွသော ခိုးဆိုး လုနှိုကျ ပွဿနာ” လှိုငျသာယာမွို့နယျ ထဲမှာ ခိုးဆိုးလုနှိုကျ တှေ မြားပွားနတော နဲ့ပတျသကျပွီး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျအခြို့နဲ့ စကားပွောကွညျ့မိတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ရငျဖှငျ့ခကျြ aလးတှကေို အမြားသိရှိပွီး ဝဖေနျအကွံပွု နိုငျအောငျ တငျပွပေး လိုကျပါတယျ။ ခိုးဆိုးလုနှိုကျတှေ ဘာ့ကွောငျ့မြား နရေတာလဲ?
လှိုငျသာယာမှာ လူဦးရေ အရမျး ထူထပျမြားပွားလာကွောငျး။ ယခငျက ရပျကှကျ အလိုကျ ကောကျတိုတှေ ရဲ့စာရငျးကို ပွုစုရကွောငျး၊ ခိုးဆိုးလုနှိုကျ ကြူးလှနျဖူးသူတှရေဲ့ စာရငျးတှပေါ သူတို့စီမှာရှိကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ အခုလကျရှိ ကြူးလှနျနသေူတှဟော ကြျောကွားစာရငျးဝငျ သူတှမေဟုတျဘဲ လူငယျ၊လူသဈ တှဖွေဈနကွေောငျး၊ ယခငျလို ပုံစံကြူးလှနျ တာမြိုး မဟုတျဘဲ ကွုံရငျကွုံသလို နယျမရှောငျ နရောမရှောငျ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ကြူးလှနျနခွေငျးကွောငျ့ အမှုတှမြေား လာရခွငျးဖွဈကွောငျး၊ လုယကျသူ တဈယောကျကို ဖမျးမိရငျ အမှုက ၄မှုမှ ၁ဝမှုထိ ပျေါပေါကျကွောငျး၊ ထိုလူမြိုး ၁ဝယောကျဆိုရငျပငျ အမှု ရာကြျောသှားနိုငျကွောငျး၊ ဧညျ့စာရငျးဥပဒမေရှိတော့တဲ့အတှကျ ဧညျ့စာရငျးစဈလို့မရတော့ကွောငျး ပွောငျးရှလေုပျသားတှနှေငျ့အတူ ပွဈမှုကြူးလှနျသူတှပေါ ပါလာတတျကွောငျး၊ မညျသူမညျဝါ ခှဲခွားရနျခကျလာကွောငျး၊ တခြို့ဆိုရငျ မထငျရလောကျအောငျရုပျရညျသနျ့ပွနျ့တတျကွောငျး၊ ရဲဝနျထမျးအငျအားမှာလညျးမလုံလောကျကွောငျး၊ ကြူးလှနျသူအမြားစု ဟာ မိသားစု စားဝတျနရေေးကိုဖွရှေငျးဖို့ထကျ အလုပျလကျမဲ့ လှယျလှယျရ၊ လှယျလှယျသုံးဖွုံးခငျြသောကွောငျ့ဖွဈကွောငျး
ဆိုးသှမျးရမျးကားသူမြားကို ဖမျးဆီးရာမှာ တပျဖှဲ့ဝငျတှေ အတှကျ အန်တရာယျမြားပါကွောငျး၊ တဈခါတဈလမှော ယူနီဖောငျး ဝတျထားသညျ့တိုငျ ဓားနဲ့အထိုးခံရတာလညျး ရှိတတျကွောငျး ခုနောကျပိုငျး ပွဈခတျဖမျးဆီးတာ မြိုးတှရှေိလာတဲ့အတှကျ လူဆိုးလူမိုကျမြားကို ဖမျးဆီးလို့ရပမေယျ့ အပွဈပေးတဲ့ အလုပျဟာ တရားရုံးက ဆုံးဖွတျတာဖွဈကွောငျး၊ မကွာသေးခငျ က အောငျမင်ျဂလာဈေးရှမှေ့ာ သိမျသမုတျပှဲစောငျ့ရှောကျနတေဲ့ရပျကြေးအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့မှ မူးယဈရမျးကားသူမြားအားတားဆီးရာတှငျ တပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးဓားထိုးခံရကွောငျး၊ ထိုအမှုကို တရားခံဘကျမှ နာမညျကြျောရှနေ့မြေားငှါးရမျးပွီး လိုကျနတေဲ့အတှကျ ထိုရှနေ့မှေ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှကေိုပငျ တရားစှဲမညျ့သဘောမြိုးတရားခှငျမှာပွောဆိုခွိမျးခွောကျနကွေောငျး၊ တခြို့သောတရားစီရငျရေးမှာ အံ့သွစရာကောငျးကွောငျး၊ ရဲတှကေ လုံးထှေးဖမျးဆီးပွီးမှ မိတဲ့တရားခံတှဟော တရားခှငျကနေ ပွနျလှတျလာကွကွောငျး၊ ပွနျလှတျလာတာနဲ့ဖမျးတဲ့ရဲကို အသကျအန်တရာယျဖွဈအောငျရနျပွုတတျကွောငျး၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားမှာလညျး လူသားမြားဖွဈ၍ သမေညျကိုတော့စိုးရိမျကွကွောငျး၊
သမှေမကွောကျ ခပျမိုကျမိုကျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားကိုတော့ အဝေးကိုရောကျအောငျနညျး အမြိုးမြိုးနဲ့လုပျဆောငျ တတျကွောငျး၊ တခြို့ဆိုရငျ ကုံးသီးတှနေဲ့ ဝိုငျးဝနျးခြောငျးမွောငျးပဈခတျပွီး ထှကျပွေးသှားတတျကွောငျး၊ ကွာလာတော့ လညျး တပျဖှဲ့ဝငျတှဟော မသိသလိုဆောငျလာ ရတော့ကွောငျး၊ ဖွဈမှ ထပွီးအရေးယူရတာတှေ လုပျရတော့ကွောငျး၊ မှုခငျးတှမြေားရငျသာ ရဲတှကေို အပွဈတငျကွပမေယျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျပွီး မှုခငျးနှိမျနငျးဖို့ တိုကျတှနျးတဲ့သူ ရှားပါးကွောငျး၊ ကောကျတိုတှကေို တှတေ့ာနဲ့ ပထမအကွိမျ သတိပေးပွီး ဒုတိယအကွိမျမှာ ဖမျးဆီးအရေးယူကွောငျး၊ သို့သျော လူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှား သူမြားရဲ့ရနျကိုလညျးရှောငျရှား ရသဖွငျ့ ထငျသလောကျ မလှယျကူ ပါကွောငျး၊ နဝလီရှဝေယျသူ မြားကို ခြိတျဆကျအကူအညီတောငျးပွီး မှုခငျးကဆြငျးရေးအတှကျ ရှတေိုရှစေ လာရောငျးရငျသတငျးပေးဖို့ စညျးရုံးပမေယျ့ မိမိအကြိုးကို လကျလှတျခံပွီး တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး ဦးစားပေးကာ သတငျးပေးတဲ့သူမှာ အငျမတနျရှားပါးကွောငျး၊
တခြို့ရှဆေိုငျကွီးမြားမှာ ပွငျပရှမေဝယျပါဟု ဆိုငျးဘုတျ တပျထားသျောလညျး နောကျကှယျတှေ ပွငျပရှဝေယျ သူမြားကို ငှထေုတျပေးနသေူမြားလညျး ရှိတတျကွောငျး၊ ထိုသူမြားမှာ ပါတီတဈခုခုရဲ့ အရှိအဝါကို အမိအရဆုတျကိုငျ ထားတတျကွောငျး၊ မိမိတို့မှာ သူခိုးလကျခံမှနျး သိသိကွီးနဲ့ ဖျောထုတျမရတာမြိုး တှလေညျးရှိတတျကွောငျး၊ သိနျးရာကြျောတနျပစ်စညျးကို ၅သိနျးလောကျနဲ့ ရောငျးသှားတဲ့ ဖွဈစဉျက တရားခံမြား မိလို့ သူရောငျးတဲ့နရောလိုကျပွတဲ့အခါ ရှဝေယျတဲ့ နဝလီရှဝေငျဆိုငျတှဟော မရှိတော့ကွောငျး၊ ရဲတပျဖှဲ့နဲ့မလုံလောကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ မွို့နယျထဲမှာ CCTV အကူအညီ ယူရာမှာလညျး ထိုCCTVမြား ဖကျြဆီး၊ပြောကျရှမှု မဖွဈစရေေး ပွညျသူတှကေိုပဲအကူအညီတောငျးခံရမှာဖွဈပါကွောငျး၊ တပျဖှဲ့ဝငျတှဟော ၂၄နာရီတာဝနျထမျးနရေတဲ့အပွငျ နစေ့ဉျ ပွဿ နာ ပေါငျးမြားစှာနဲ့ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုမြားကာ ပွညျသူတှနေဲ့ဆကျဆံတဲ့နရော၌ နားဝငျခြိုအောငျ စိတျရှညျလကျရှညျပွောပွဖို့ အတျောအားနညျးသညျကိုလညျး ဝနျခံပါကွောငျး၊ ထို့အတှကျနားလညျပေးစလေိုကွောငျး၊
အိပျရေးမဝတဲ့သူမြားဟာ စိတျဖိစီးမှုမြားပွီး စိတျမရှညျတတျတဲ့ ရောဂါ ဖွဈတတျပါကွောငျး ပွညျသူထဲက ပေါကျဖှားတဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျတှေ ဟာလညျး လူသားတှပေငျ ဖွဈလို့ မှားတဲ့အခါမြိုး တှမှော ဝိုငျးဝနျးဆဲဆိုကွသလို မှနျကနျတဲ့လုပျရပျတှေ အတှကျလညျး အားပေးကွစလေိုကွောငျး။ မိမိပယောဂကွောငျ့ မှနျကနျသော တပျဖှဲ့ဝငျမြား မိမိမွို့နယျအတှကျ မဆုံးရှုံးစေ လိုကွောငျး။ ပွောပွ သိရှိရပါသညျ။ ပွညျသူအနနေဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျတှကေို မှားရငျလညျးထောကျပွ ဝဖေနျပွီး တညျ့မတျ ပေးကွဖို့၊ ကိုယျခငျြးစာကွဖို့၊ မှနျကနျတဲ့တပျဖှဲ့ဝငျတှေ ကိုလညျး အားပေးကူညီကွဖို့ ဒါမှသာ မိမိမွို့နယျ အတှကျ မှုခငျးကဆြငျးရေးတှငျ ကူညီရာအမှနျ ရောကျမညျဖွဈပါကွောငျး ရေးသားတငျပွလိုကျရပါသညျ။